Qodista ceel -biyoodku faa'iido ma leeyahay? - Dhuumaha Vinyl - Vinylpipe
Naga soo wac 24/7
Noo soo dir Boostada
8/33 Kirti Nagar Aagga Warshadaha, New Delhi
Dhuumaha Qoraalka uPVC
Tubooyinka Tuubbooyinka uPVC
Dhuumaha Piezometric uPVC
Dhuumaha Cadaadiska uPVC
Dhuumaha Dheecaanka Biibiilaha SWR
Dhuumaha Tuubbooyinka uPVC
Xidhmada Goosashada Biyaha Roobka
Wararka & Warbaahinta
Soo qaado Quote
Qodista ceel-biyoodku faa'iido ma leeyahay?- Dhuumaha Vinyl
Ceelka, Borewell, Dhismaha Buundada, Case Study, Isbarbar, Qalabka elektiroonigga ah, Dhismaha Warshadaha, Injineernimada farsamada, Batroolka iyo Gaaska, Nidaamyada Awoodda, Dhibaatada & Xalka, uPVC Tuubada Kaydka, uPVC Tuubada Column, Biyo La'aan
“Suuqa mar walba wuu isbedelayaa, talada ugu weyni waa in la dhegaysto halka uu ku socdo suuqa oo la waafajiyo qalabkaaga, ganacsigaaga, mareegahaaga si aad ugu haboonaato baahiyaha suuqa,” ayay tiri Gary L. Hix, lataliyaha ceelka biyaha iyo milkiilaha In2Wells LLC, USA. Runtii taasi waa talo weyn oo loogu talagalay kuwa qodista ceelasha biyaha adduunka oo dhan. Baahida biyo qodista ayaa sii kordheysa, taasina waa war u wanaagsan dadka adiga oo kale ah ee ku jira warshadaha qodista ceelka biyaha. Laakiin kuwani waa waqtiyo adag sidoo kale. Kaliya maahan inaad hubiso habab badbaado leh oo deg-deg ah oo qodista, waa inaad sidoo kale iska ilaalisaa tartanka, oo inta badan ku dhammaataa inaad la shaqeyso cidhifyada dhuuban. Macaamiishu waxay filayaan ceelal biyood oo tayo sare leh oo raagaya. Markaa ganacsigu inta badan waa adag yahay. Ma aha inay noqoto, isla marka aad ogaato siyaabo aad ku hagaajin karto dariiqyadaada qodista ceelka biyaha. Markaad kor u qaaddo cidhifyadaada, ganacsigu wuxuu noqonayaa mid aad u fudud. Habka ugu dhaqsaha badan ee taas loo sameeyo? Ka fogow adeegsiga Dhuumaha GI ama tuubooyinka Inox ee biraha aan lahayn iyo bilaaw isticmaalka uPVC.
Ha moogaan inaad wax akhrido
Wali miyaad isticmaashaa tuubooyinkii hore ee GI -ga oo si fudud u mirqaada?
Tuubooyinka uPVC ee ka yimid soo -saare lagu kalsoonaan karo ayaa noqon kara beddelka ciyaarta ganacsigaaga qodista uu raadinayo. Waxaad heshaa badeecad aad uga sareysa tuubbooyinka birta / birta, iyo sidoo kale tayada biyaha oo ka fiican.
Waa tan sida aad u xoojin karto ganacsigaaga, si fudud adoo adeegsanaya tuubooyin uPVC oo tayo wanaagsan leh.
Tuubooyinka uPVC waa 63% ka jaban!
Celcelis ahaan, tuubooyinka uPVC oo tayo leh, sida kuwa ka yimid Vinyl, ayaa 63% ka qiimo yar dhuumaha birta. Taasi lafteedu waxay kuu keenaysaa kayd dhan $ 1400 halkii ceel!
Ku kharash garee foosha
Waayo? Sababtoo ah tuubooyinka uPVC aad bay uga khafiifsan yihiin tuubooyinka birta. Markaa rakibiddaadu si dhakhso leh ayey u baahan tahay shaqaale iyo ilo yar. Adiguna sidoo kale uma baahnid qalab gaar ah alxanka iyo isku -dubaridka.
Waad iibin kartaa, xitaa 50 sano kadib!
uPVC waxay leedahay qiime dib -u -warshadayn oo sarreeya. Ka dib 50+ sano oo la isticmaalay, tuubooyinka ayaa dib loo warshadeyn karaa ama dib loo isticmaali karaa 100+ sano codsiyada aan muhiimka ahayn.
Macaamiishaadu waxay kaydsadaan kharashyada tamarta iyo dayactirka!
Haddii aad qodi kartid ceelal muddo dheer jira oo u baahan dayactir iyo kharash yar, macaamiishaadu aad bay kuugu farxi doonaan. Waa tan sababta:
Koronto yar: Iskudhaca hoose ee gudaha dhuumaha ayaa keenaya madax -yaraan, ceelku wuxuu u baahan yahay ilaa 23% koronto ka yar.
uPVC ma dumin ama miridho: Tani waxay u oggolaaneysaa boosaska in loo qaabeeyo si loo kordhiyo dulqaadashada, yaraynta iska caabbinta socodka.
Nolol dheer: Tuubooyinka uPVC waxay u adkaystaan ​​bakteeriyada iyo walxaha daxalaysta ee laga helo deegaanka aan fiicnayn ee ku xeeran ceelka. Waxay u shaqayn karaan si aan kala sooc lahayn 50+ sano.
uPVC waxay u adkaysanaysaa daxalka kiimikada: Wax saamayn ah kuma yeelan kiimikooyinka loo isticmaalo nadiifinta iyo dib -u -cusboonaynta ceelasha.
Heerka cuntada: Tuubooyinka uPVC waa darajada cuntada, oo ka maran sumowga biraha.
Dayactir hooseeya: Tuubooyinka uPVC oo tayo fiican leh ayaa leh cadaadis aad u sarreeya sidaa darteed way fudud yihiin sidoo kale waxay u adkaystaan ​​cadaadiska. Dayactirka marar dhif ah ayaa loo baahan yahay.
Miisaan yar oo haddana ka xoog badan birta: Xoogga gaarka ah ee PVC wuxuu ku dhawaad ​​78% ka sarreeyaa birta.
Adigoo si fudud u dooranaya adeegsiga tuubooyinka uPVC oo tayo sare leh halkii aad ka heli lahayd tuubooyin bir ah, waxaad heleysaa waddooyin badan oo aad hoos ugu dhigi karto kharashyada. Sababtoo ah waxaad bixin doontaa ceel biyo tayo sare leh, waxaad hadda dejin kartaa qiimahaaga. Oo hel faa'iidooyin ka fiican! La sheekayso annaga khabiir uPVC maanta!
5 Sababood oo ah inaad u isticmaasho Dhuumaha uPVC Mashaariicda Biyaha
Caqabadaha Biyaha ee Ruushka- Si qoto dheer u fiiri
7 Tuubooyinka ugu sarreeya ee uPVC Tilmaamaha in la ogaado - Dhuumaha Vinyl
Soo -saaraha Bamka iyo Dhuumaha waa inuu akhriyaa - Dhuumaha Vinyl
Qalabka elektiroonigga ah
Batroolka iyo Gaaska
Dhibaatada & Xalka
uPVC Tuubada Kaydka
uPVC Tuubada Column
Injineernimada Shidaal & Gas
Saxiix si aad nooga hesho qoraalladii ugu dambeeyay
Inaad noqoto hormuudka maaraynta biyaha ee ISO 9001, sumad-sameynta biibiile ee Hindiya, annaga oo ah Vinyl Tubes, daryeel dhammaan baahiyahaaga maaraynta biyaha.
8/33 Kirti Nagar Aagga Warshadaha, New Delhi -110015, India
sababta tuubooyinka vinyl
Shabakada Caalamiga ah
Ku biir Wargeyskeena & Dhacdada hadda si aad u cusbooneysiiso.
Su'aal ma qabtaa? Riix halkan
2021 XNUMX Xuquuqda Dhammaan Waa La Ilaaliyey
Soo qaado A Quote Free
La xiriir Maya(Loo baahan yahay)
Codsi Dheeraad ah
Booskani waa ujeedooyin ansixin waana in laga tagaa isbeddel.
Connect Us Iyadoo
Isla markiiba hel qiimo dhimis 5%!
La Xiriir Khubaradayada